Xaafadaha Seattle: Magaalada ColumbiaCity – Taariikh Kooban - HistoryLink.org
Xaafadaha Seattle: Magaalada ColumbiaCity – Taariikh Kooban
Magaalada Columbia, waa xaafad taariikhi ah oo ku taala koonfur-bari Seattle, oo ku bilaabantay dhul magaalo loogu talogalay oo uu dhisay Camirraha J. K. Edmiston, kaasoo ka dhisay khad tareen oo koronto ah oo ka yimaad suuqa hoose ee Seattle soo dhex mara Rainier Valley soona dhinac raacay dhabbaha ay hadda raacday Rainier Avenue. Magaalada Columbia waxay ahayd magaalo iskeedu madaxbannaan, 1893kii. Ayaalagu daray Seattle 1907. Soosaareyaasha sida Hitt Fireworks Company iyo Heater Glove Company ayaa quudinayey dhaqaalaha deegaanka ilaa Dagaalkii II ee Adduunka, markaasoo xaafaddu hooy u noqotay shaqaalaha difaaca, Hitt Fireworks-na waxay u digo rogatay soosaarista qalabka milatariga. Magaalada Columbia waxay aragtay hoos u dhac sannadadii dagaalka ka dambeeyey, oo gaadhay halka u hoosaysa dabayaaqadii 1970dii markaaso falalka dambigu uu ahaa arrin wayn.Dhismeyaalwaddada saaran oo badana madhnaayeen. Tobanaankii sano ee xigay, dadaalo wadajira oo dawladda iyo shicibba leh ayaa caawiyey soo noolaynta meesha. Bulashada ganacsatada deegaanku waxay ku guulaysteen taallo Degmeed Bartilmaameed ah oo ay u sameeyeen magaalada Columbia 1978, oo caawinaysa dayactirka iyo jawiga fiican ee taariikhiga ah ee xaafadda. Dhismeyaasha waddada saaran ee mar madhnaa waxay noqdeen makhaayado, xafiisyo, bandhig farxano, iyo ganacsiyo kale.